Ahitra ahitra, bozaka artifisialy, ahitra sentetika - DEDGE
FAMPANDROSOANA NY ENJINY
PANEL WPC WALL
PANEL WALL SPC
DEGE dia mpamatsy tokana ny vahaolana amin'ny gorodonao sy rindrina.
Niorina tao amin'ny tanànan'i Changzhou, faritanin'i Jiangsu izy tamin'ny taona 2008, mifantoka amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana ny gorodona sy ny rindrina.
Tsara kalitao Mdf koronosy ho an'ny laminate Wooden Fl ...
Turtle artifisialy maitso 30mm
3D Nylon vita pirinty vita amin'ny kapila vita pirinty YH Series
Vaovao farany Co-Extrusion Solid WPC Decking Advanced ...
4mm Flooring tsara indrindra amin'ny vinyl
China EIR laminate gorodona
100% Panelan'ny rindrina fandroana tsy misy rano mitafy ...
Ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo-plastika (WPC) dia tian'ny mpanjifa tokoa noho ny fahombiazany avo lenta, ny fanoherana ny triatra sy ny fiovana, sns. Ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo-plastika dia tsy mora ovaina, miovaova ny hamandoana, voaporofo amin'ny bibikely, mora diovina, ...
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny taila fitobiana
Ny andian-dahatsoratra DIY vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo dia mampiseho fomba tena tsara miaraka amina endrika kely iray, izay mety kokoa amin'ny fisokirana eo an-tokotany na lavarangana. Voalohany, andeha hojerentsika ny fomban'ny vokatra: Ireo a ...
Fa maninona ny ankamaroan'ny olona no misafidy Flooring SPC?
Ny rihana plastika vato SPC dia vita amin'ny polymer polyvinyl chloride sy ny resina no tena akora fototra. Aorian'ny plastika avo lenta amin'ny ravina voafafa, ny kalisa efatra dia manome kalandrie ary manafana ny loko decora miloko ...
Inona no atao hoe WPC Cladding & Ahoana ny fampiasana azy?
WPC cladding dia teny arafitra. Izy io koa dia fitaovana fananganana tontolo iainana ampiasaina any ivelany matetika. Ny cladding dia afaka manatsara ny insulation sy ny estetika an'ny trano. Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny claddi ...